यस्तो कारण देखाउदै जापानले बाढीमा डुबेका १० वटा बुलेट रेल प्रयोगमा नल्याउने ! – Etajakhabar
यस्तो कारण देखाउदै जापानले बाढीमा डुबेका १० वटा बुलेट रेल प्रयोगमा नल्याउने !
बिबिसी – गत महिना जापानमा समुद्री आँधी हगिबिस आउँदा बाढीमा आंशिक रूपमा डुबेका १० वटा बुलेट रेललाई सेवाबाट हटाइने भएको छ। तीव्र गतिमा कुद्ने ती रेलका केही भाग अझै प्रयोगयोग्य छन्। तर ती रेललाई प्रयोगबाट हटाउँदा ११ करोडदेखि १३.५ करोड अमेरिकी डलरसम्म क्षति हुन सक्ने जापानी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
नगानो नगरको स्टेशनमा पार्क गरेर राखिएका होकुरिकु-शिन्कान्सेन मार्गमा सञ्चालन हुने ती रेलमा हगिबिस आँधीको प्रभाव परेको थियो। अक्टोबर १२ र १३ मा आएको उक्त आँधीले जापानमा धनजनको ठूलो क्षति भयो। झन्डै ९० जनाको ज्यान गयो भने हजारौँ मानिस विस्थापित भए।
पानीको भेलमा डुबेका रेलका तस्बिरले आँधीको प्रभावलाई चित्रण गरेका थिए। अब प्रयोगमा नल्याइने ती सबै रेलमा १२-१२ वटा डिब्बा थिए। होकुरिकु-शिन्कान्सेन मार्गमा चल्ने रेलले राजधानी टोक्यो र जापानको पश्चिमी तटको कानाजावालाई जोड्थे। इस्ट जापान रेल्वे कम्पनीका अध्यक्ष युजी फुकासावाले बुधवार एउटा पत्रकार सम्मेलमा बाढीले रेलका मोटर र ब्रेकिङ प्रणाली लगायतका मुख्य भागमा असर पारेको बताएका छन्।
उनले भने, “स्थिरता र सुरक्षाका हिसाबले रेललाई फेर्नु नै ठिक लाग्यो।”उक्त कम्पनीको स्वामित्वमा आठवटा रेल छन्। वेस्ट जापान रेल्वे कम्पनीका दुईवटा रेललाई पनि सेवाबाट हटाइन लागेको छ।बाढीबाट प्रभावित हुनुभन्दा अघि ती रेलले मार्गको एकतिहाइ भागको यात्रा तय गरिसकेका थिए।”हामी उक्त मार्गमा मार्च महिनाभित्र पूरै सेवा सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ,” फुकासावाले भने।अहिले त्यस भेगमा ८० प्रतिशत रेलले सेवा दिइरहेका छन्।
Posted on: Thursday, November 7, 2019 Time: 15:43:22
-17854 second ago
-17712 second ago
-17107 second ago
-11465 second ago
-10541 second ago
-2640 second ago
-1788 second ago